I-OPPO Reno isungulwe ngokusesikweni eYurophu | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwenziwa i-OPPO Reno ngokusemthethweni e-China. Nangona besele kusaziwa ukuba ukongeza kwintetho yayo e-China, uphawu lwaluza kulungiselela umboniso wale fowuni eYurophu. Umboniso Imiselwe u-Epreli 24, njengoko sele kwenzekile kule meko. Ifowuni entsha yohlobo lwaseTshayina ifika ngokusemthethweni kwimarike yaseYurophu.
Uphawu lwesiTshayina lusishiye ngeemodeli ezimbini kule ntetho, imodeli eqhelekileyo kunye isiphelo esiphezulu nge5G. Ngoku i ukumiliselwa kwezi fowuni zimbini kuluhlu lwe-OPPO Reno kwimarike yaseYurophu. Athini amaxabiso asilindeleyo kulo mba?
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo ixabiso livuzekile ukuba ifowuni yayiza kuba nayo ekuqalisweni kwayo. Ngoku, ifowuni yaziswa ngokusesikweni kwaye sele sinayo yonke idatha ekufikeni kolu luhlu lutsha lweshishini laseTshayina kwimarike yaseYurophu. Uluhlu apho uphawu luthemba ukoyisa intengiso.
I-OPPO Reno izokwaziswa ngokusesikweni eYurophu ngoMeyi 10. Iya kukhutshwa ngemibala emibini (i-Ocean eluhlaza kunye neJet emnyama). Asazi ukuba zeziphi iinguqulelo zefowuni eziza kukhutshwa. Kodwa kulindeleke ukuba ifike ezivenkileni ngexabiso le-499 euro, eli lixabiso kanye elivezwe kwiveki ephelileyo.
Kwelinye icala, i-OPPO Reno 5G iya kuphehlelelwa kwintengiso yaseYurophu ekuqaleni kukaJuni. Akukho mhla ubekiweyo ngalo mzuzu, nangona kwimeko yeSwitzerland izakuba sekupheleni kuka-Meyi. Ixabiso layo liya kuba ngama-899 euros, njengoko iqinisekisiwe yinkampani. Sikwanayo iReno 10X, eluhlobo oluphezulu ngaphandle kwe5G, kwimeko yayo, iya kubiza i-euro ezingama-799.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi Reno OPPO imele uhlaziyo olubalulekileyo lwentengiso yaseTshayina. Uluhlu oluhle lokuphucula ubukho bakho kwimakethi yaseYurophu. Ke silinde ukubona ukuba zeziphi iintengiso ezinale fowuni kwiinyanga ezizayo. Ucinga ntoni ngamaxabiso abo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OPPO Reno ifika ngokusemthethweni eYurophu
I-Huawei Y5 2019: I-smartphone entsha kraca